Noelin'ny Ankizy 2015
Ankizy 30 mahery no niara-nifaly tamin'ny Radio Voanio
Nankalazaina ny asabotsy 19 desambra 2015 lasa teo ny noelin’ny ankizy teto amin’ny Radio Voanio. Toy ny fanaon’ny onjampeo, FM 98.2, isan-taona dia tsy manadino ireo ankizy sy mpanaraka ny onjampeo, ireo zanaky ny mpisa ao aminy. Samy nahazo ny anjarany avoakoa ny tsirairay. Nizara maromaro ny lanonana ka ny fizarana voaloha dia ny fampilalaovana ny ankizy tamin’ny alalan’ny dihy sy ny tsianjery.
Niisa 30 mahery ireo ankizy no niatrika ity hetsika isan-taona izay ataon’ny Radio Voanio. Iasany nampiavaka ity noelin’ny ankizy tamin’ity taona ity dia ny fandihizan’i Dadabe noely niaraka tamin’ireo ankizy; dihy isan’ny ankafizin’ireo kilonga madinika dia tsy inona izany fa ny dihy Gwetta.
Tamin’ny fizarana faharoa kosa dia nafanain’ireo tarika "amazing dance" ny sehatra. Samy nahazo fahafinaretana avokoa ny rehetra na ireo ankizy madinika na ireo Ray aman-dReny izay niatrika ny lanonana. Tamin’ny fizarana fahatelo no tena nadrasan’ireo ankizy, dia ny fizara kilalao nataon’i Dadabe noely tamin’ireo ankizy. Feno hafaliana tanteraka ny ankizy sy ny Ray amand-Reny, samy tsy nisy diso anjara ny rehetra ka samy naneho ny fahafahampony avokoa. Naheno fisaorana avy ny Ray aman-dReny, nandritran’ny fandraisan’izy ireo fitenenana, ka nisaotra ny ekipan’ny Radio Voanio rehetra tamin’ny famalifaliana sy ny zava-bita hatramin’izay. Nisy fametrahana fahatsiarovana, fiarahana maka sary tamin’I Dadabe noely sy ny rehetra no namaranana ny lanonana.
Marihana fa “Noelin’ny Ankizy” andiany faha efatra no nankalazaina teto amin’ny hefitrano malalaky ny Radio Voanio, ny asabotsy 19 desambra lasa, ary mbola ho hisy hatrany ny fankalazana izany isan-taona.
izahay eto amin’ny onjam-peon’ny Radio Voanio dia mirary Krismasy sambatra sy Taom-baovao 2016 ho antsika rehetra.
(113) Lantomalala S. : 22-12-2015 - 07:13